Xage maraya Dagaalki Farmaajo War ee ka socday Gobolada Dalka – Kismaayo24 News Agency
Xage maraya Dagaalki Farmaajo War ee ka socday Gobolada Dalka
by admin 10th November 2017 051
Ciidamada Militariga Soomaaliya ayaa sii kordhiyay howlgalada ka dhanka ah Maleeshiyada Shabaab,gaar ahaan deegaanada kuyaala xadka ay wadaagaan Shabeelooyinka oo ay ku sugan yihiin cutubyo katirsan ciidanka Xoogga Dalka.
Abaanduulaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Janaraal C/llaahi Cali Caanood ayaa Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA u xaqiijiyay in 3 katirsan Shabaab lagu dilay howlgalkaasi halka 4 kalena looga dhaawacay.
Janaraal Caanood ayaa sheegay in howlgaladani ay qeyb ka yihiin gulfka ka dhanka ah maleeshiyada SHabaab oo la doonayo in guud ahaan laga sifeeyo dalka.
Deegaanada howlgaladaasi ka socda ee kuyaala xadka Shabeelooyinka ayaa dhowr jeer Shabaab waxaa ay dhibaatooyin ay ugu geysteen dad ku safrayay wadadaasi.
Magaalada Kismaayo markii ugu horaysay laga hergaliyay….
admin 2nd September 2018 2nd September 2018
ISIS oo dil ugu hanjabtay 100 askari oo Maraykan ah!